WINDOWS7မှာအမှား 0XC0000005 ၏ဆုံးမပဲ့ပြင် - WINDOWS ကို - 2019
အလွန်ခေတ်မီဆန်းပြား software ကိုဖြစ်သည့် Windose operating system ကိုကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်မှစနစ်တကျအလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ applications များဖွင့်သည့်အခါကုဒ် 0xc0000005 နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
ဒီ code ပြေး applications များအတွက်ပြဿနာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ, အမှားပေးတဲ့ dialog box ကိုပြသ, ဒါမှမဟုတ်စနစ်အားလုံးဆော့ဖျဝဲ updates တွေကို၏ပုံမှန်လည်ပတ်နှောင့်ယှက်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်များအတွက်ပြဿနာများ, သင်သည်ထိုသူတို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းများကဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ hack software ကိုသုံးလျှင်, ထို့နောက်ကနေစွန့်ပစ်ရပါမည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Windows7မှာ Programs ကို Add သို့မဟုတ် Remove
ပြန်လည် install ပြုလုပ်လုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်နည်းလမ်းများသွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ခေါ်မှုပြဿနာအဆင့်မြှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်တယ်, ရလဒ်, ပြုပြင် system files ကိုအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါလျှင်။
Method ကို 1: အဆိုပါ control panel ကို
အဆိုပါဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက" နှင့် link ကို click နှိပ်ပြီး "အစီအစဉ်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ".
အပိုင်းကိုသွားပါ "View installed updates များကို".
လိုအပ်သော updates များကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တည်ရှိသည် "Microsoft Windows နဲ့"။ အောက်တွင်ကြှနျုပျတို့သညျ "နှင်ထုတ်ခြင်း" ကိုဘာသာရပ်ရှိသူများစာရင်းတစ်ခုပေး။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး update ကိုရှာတွေ့ပါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ယွမ် click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ကိုဖျက်"။ တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါနဲ့ application များ၏စွမ်းဆောင်မှုကိုအတည်ပြုရမည်သတိပြုပါ။
Method ကို 2: စစ်ဌာနချုပ်လိုင်း
ဤနည်းလမ်းကိုကြောင့်ပျက်ကွက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဒါပေမယ့်လည်းစနစ် tools တွေကိုသာ run လို့မရပါဘူးဘယ်မှာကိစ္စများတွင်ကူညီပေးသည် - သို့မဟုတ် applets 'Panel ကိုထိန်းချုပ် "။ အလုပ်အဘို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ Windows7ကိုတပ်ဆင်ဖို့ကားမောင်းသို့မဟုတ် flash drive ကိုရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: တစ်က USB drive ကနေ Windows7ကို install အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
Installer ကိုပြီးတဲ့နောက်အားလုံးလိုအပ်သောဖိုင်များကို download လုပ်ပါနှင့်စတင်မျက်နှာပြင်ပြသော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ် SHIFT + F10 console ကိုဖွင့်ဖို့။
အဆိုပါ hard disk ကိုတစ်ဦးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော partition ကိုထွက်ရှာပါ, သည်, တကဖိုင်တွဲများပါဝင်သည် "Windows ကို"။ ဤအသင်းပြု
dir က e:
ဘယ်မှာ "အီး:" - ကစာတစ်စောင်အပိုင်းစွပ်စွဲနေပါတယ်။ ဖိုင်တွဲခဲ့လျှင် "Windows ကို" ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတခြားအက္ခရာများနှင့်အတူလည်ပတ်ရန်ကြိုးစားပြီးတော့, မဟုတျပါဘူး။
ယခုငါတို့, အဖွဲ့သည်ထည့်သွင်း updates များကိုစာရင်းတစ်ခုအရ
dism / ပုံရိပ်: အီး: / get-packages များ
ဆိုတာသတိရပါအစား "အီး" သငျသညျစနစ် partition ကိုသင့်ရဲ့စာတစ်စောင်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ DISM tool ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ parameter သည် updates များကို packages များ၏ရှည်လျားသော "Sheet" ငါပေးမည်။
အဆိုပါပစ်လွှတ် pad ပါအမှုထမ်းညာဘက်ကို manual update ကိုခက်ခဲပါလိမ့်မည် Find ဒါ
LMB Hold များနှင့်အတူစတင်အပေါငျးတို့သလိုင်းများကို select "အထုပ်များစာရင်း" သို့ "ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့"။ ကိုသာဖြူကိုဧရိယာသို့ရတယ်အဘယျသို့ကူးယူကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ။ သတိထားပါ: ငါတို့ရှိသမျှသည်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ကူးယူခြင်းအတွက်မည်သည့်အရပ်ပေါ်မှာယွမ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြု "Prompt ကိုဆင့်ဆို"။ ဒေတာအားလုံးကိုအဆိုပါမှတ်စုစာအုပ်သို့ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Notepad ထဲမှာ, ကီးဘုတ် shortcut ကိုနှိပ် CTRL + F ကိုအဆိုပါ update ကိုကုဒ် (အထကျစာရင်း) နှင့်ကလစ်နှိပ် Enter "Next ကိုရှာပါ".
ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ "ကိုရှာပါ"လူအပေါင်းတို့ name ကို Select လုပ်ပြီးအထုပ်ကိုတွေ့နှင့် clipboard ထံကကော်ပီကူး။
အဆိုပါကိုသွားပါ "Prompt ကိုဆင့်ဆို" နှင့် command ကိုရေးရန်
dism / ပုံရိပ်: အီး: / ကိုဖယ်ရှား-အထုပ်
Next ကိုကျနော်တို့ပြီးအောင် "/" နှင့်လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အမည်အားထည့်သွင်း။ ဒါဟာဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်:
dism / ပုံရိပ်: အီး: / ကိုဖယ်ရှား-အထုပ် /PackageName:Package_for_KB2859537~31bf8906ad456e35~x86
သင့်အမှု၌, အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် (ဂဏန်း) ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ပဲသင့်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်မှသူတို့ကိုကူးယူပါ။ နောက်ထပ်အချက်: တပြင်လုံးကိုအဖွဲ့သည်တဦးတည်းလိုင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရမည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းထဲကအားလုံး updates များကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် PC ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့အတူတူပင်လမ်း။
Method ကို 3: System ကိုဖိုင်များ Restore
ဒီနည်းလမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစနစ်ဖိုလ်ဒါထဲမှာအချို့ဖိုင်တွေ၏သမာဓိနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတည်ပြုရန် console ကိုပညတ်တော်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဤအလုပ်လုပ်ဘို့, "Prompt ကိုဆင့်ဆို" ဒါဟာစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ကို run ရပါမည်။ ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့်:
မီနူးဖွင့်လှစ် "Start"ထိုအခါ drop-down list ကို "All Programs" နှင့်ဖိုင်တွဲကိုသွား "စံ".
ညာဘက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Prompt ကိုဆင့်ဆို" နှင့်ဆက်စပ် menu ထဲကသင့်လျော်တဲ့ option ကိုရွေးပါ။
dism / အွန်လိုင်း / သန့်ရှင်းရေး-image / restorehealth
လူအပေါင်းတို့သည်စစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်သင်၏ကွန်ပျူတာ restart ချလိုက်ပါ။
သင်၏ Windows (တည်ဆောက်) လိုင်စင်မပါလျှင်, သင် system files ကိုအစားထိုးလိုအပ်ကြောင်း themes များခန့်ထားပြီဆိုပါကဒီ technique ကို, သတိနဲ့အသုံးပြုရမည်သတိပြုပါ။
အမှား 0xc0000005 "Windows ကို" ခိုးကူးအသင်းတော်များကိုအသုံးပြုပြီးအထူးသဖြင့်အခါ, အတော်လေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ပြင်ပေးနှင့်အစီအစဉ်များအက်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြဘူးလျှင်, အခမဲ့ရှိသော counterpart များအတွက် Windows ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲ "kryaknuty" software ကိုပြောင်းပေးပါ။